Haddii Uu Koobka La Liga Ku Badalan Lahaa UCL, Haddii Uu Daawaday Final-kii Champions League Ee Kiev, Inuu Markasta Real Madrid Guuldarro U Rajeeyo Iyo Lionel Messi Oo Waraysi Xiiso Badan Bixiyay Ka Hor Koobka Aduunka. – GOOL24.NET
Haddii Uu Koobka La Liga Ku Badalan Lahaa UCL, Haddii Uu Daawaday Final-kii Champions League Ee Kiev, Inuu Markasta Real Madrid Guuldarro U Rajeeyo Iyo Lionel Messi Oo Waraysi Xiiso Badan Bixiyay Ka Hor Koobka Aduunka.
Hogaamiyaha kooxda Barcelona ahna kabtanka xulka qaranka Argentina ee Lionel Messi ayaa bixiyay waraysi aad u xiiso badan maalmo kahor tartanka koobka adduunka, Messi ayaa waraysigan kaga faalooday qodobo dhawr ah oo ay kamid yihiin haddii uu horyaalka La Liga ku badalan lahaa tartanka horyaalada Yurub ee UCL.
Waxa kale oo qayb ka ah Haddii uu daawanayay Final-kii Champions League ee dhex maray Liverpool iyo Real Madrid isla markana ay guusha heshay Los Blancos iyo haddii uu markasta guuldaro la jecel yahay Real Madrid iyo qodobo kale oo badan.
FG: Waxa aanu waraysiga xiisaha badan ee uu bixiyay Lionel Messi idiinku soo gudbin doona qaab su’aalo iyo jawaabo ah inaga oo hoos ku xusi doona meelihii ugu muhiimsanaah ee wax laga waydiiyay kabtanka xulka Argentina.
Kaddib markii ay Real Madrid hanatay Champions League, Barcelona ay sidoo kale hanatay La Liga iyo Copa Del Rey waxa jiray dood ku saabsan kooxdee qaadatay xili ciyaareed fiican, Adigu maxaad filanaysaa?
Waxaan qaadanay xili ciyaareed fiican oon ku guuleysanay laba koob waa xaqiiq in qofkasta uu xiisaynayo ku guuleysiga Champions League maxaa yeelay waxa ay ka dhigantahay in lagu guuleysto laakiin majirto baahi loo qabo in wax laga soo qaado wixii aanu qabanay.
Ku guuleysiga La Liga iyo ku guuleysiga Champions League waa wax kala duwan, Xili ciyaareedka Barcelona waxa uu ahaa mid khaas ah waxa aanu guuldaraysanay kaliya saddex ciyaarood xili ciyaareedka oo dhan laakiin mid kamid ah waxa ay naga saartay tartanka ugu xiisaha badan,Ku guuleysiga labada koob waa wax aad u fiican”
Miyaad ku badalan lahayd tartanka UEFA Champions League horyaalka La Liga?
“Maya ku guuleysiga La Liga iyo Copa waa muhiim, Maaha wax fudud sidii aan hore u idhi marka laga yimaado tartanka Champions League xili ciyaareedku waxa uu ahaa mid xaqiiqdii fiican”
Waxa aad ku guuleysatay afar Champions League Real Madrid-na waxa ay ku guuleysatay afar shantii sano ee u dambeeyay, Dadka qaar waxay yidhaahdaan in 7-dii sano ee u dambeeyay aad ku guuleysaten hal Champions League ma aha wax ku filan jiilka ciyaartoyda ah ee ku sugan Barcelona, Adigu maku raacsantahay?
Haa waan ku raacsanahay, Xaqiiqda ayaa ah inaan jeclaan lahayn ku guuleysiga Champions League intaa ka badan.
Ma daawanaysay Final-kii Champions League ee ka dhacay Kiev?
“Wax yar ayaan ka daawaday, Marka aan daacad noqdo, Maya ma aanan wada daawan maxaa yeelay waxa aanu joognay Argentina wakhtiyaduna isku mid ma ahan, Waxaan daawaday goos goosyada ciyaarta iyo waxkasta oo halkaas ka dhacay”
Sidii uu hore u yidhi Jordi Alba ma jeceshahay in Real Madrid ay markasta guuldaraysato?
“Waxaan raba inaan guulaysto anigu, Waxa ay kooxaha kale sameeyaan ima xiiso galiyaan, Ka ciyaartoy Barcelona ahaan waligay ma doonayo in cadawgeena ugu wayn uu guulaysto laakiin wax kasta kahor waxa aan jeclahay inaan guul gaadhsiiyo naftayda”
Antoine Griezmann ma yahay shaqsiga ay kooxdu u baahantahay?
“Ma ogi haddii uu yahay muhiimada koowaad ee kooxda, Waxaan ku raacsanahay in aan u baahanahay ciyaartoyda ugu fiican si aan markale u hanano Champions League, Griezmannwaa mid kamid ah haddii ay kooxdu la saxeexato waa cajiib.
“Ma ogi haddii uu yahay muhiimada koowaad taasi waxa ay ku xidhan tahay gudida saxeexyada iyo tababaraha, Waxa kaliya een odhan karo ayaa ah in aad u baahantahay ciyaartoyda ugu fiican si aad ugu guuleysato Champions League isaguna waa mid kamid ah”